Ekwentị | December 2019
Ịwụnye VKontakte na smartphones na android na iOS
Netwọk mmekọrịta ndị mmadụ na VKontakte (VK) na-ewu ewu na mpaghara ụlọ nke Intanet. Ọtụtụ, ndị ọkachamara na-enweghị ọrụ, gaa na ebe nrụọrụ weebụ ya naanị site na ihe nchọgharị na PC, na ị maghị na ịnweta ihe niile na arụmọrụ ya nwere ike ịnweta site na ngwaọrụ mkpanaka na-agba ọsọ ọ bụla n'ime usoro arụmọrụ kachasị.
Esi bulite vidiyo gaa na netwọk mmekọrịta VKontakte site na Android-smartphone na iPhone
Dịka ị maara, onye ọ bụla nọ na VKontakte nwere ohere iji megharịa ndekọ ndekọ netwọk mmekọrịta ya na ndekọ vidiyo ya. Na-ebugote faịlụ mgbasa ozi na ebe nchekwa akụ anaghị esiri gị ike, ihe ndị enyere gị aka nwere ntụziaka ndị ọrụ nke gam akporo smartphones na iPhones ji arụ ọrụ.
Esi budata egwu site na VK na ekwentị na android na iPhone
Ihe ime ma ọ bụrụ na ekwentị anaghị agbanye
Smartphones dabere na sistemụ arụmọrụ nke oge a - Android, iOS na Windows Mobile mgbe ụfọdụ anaghị agbanye ma ọ bụ mee ya na oge. Nsogbu nwere ike kpuchie ma na ngwaike na na ngwanrọ. Ihe ndị na-emekarị na nsonye nke ekwentị Ama nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ n'ọnọdụ ebe batrị ahụ kwụsịrị ihe onwunwe ya.
Anyị jikọtara ngwaọrụ mkpanaka na kọmputa
Ọtụtụ ndị ọrụ nke oge a nwere ọ bụghị nanị na kọmputa nkeonwe, ma ngwaọrụ mkpanaka, nke a na-eji dị ka foto na-akpa na kamera vidiyo, ngwaọrụ maka ịrụ ọrụ na foto na akwụkwọ, nakwa dị ka ndị egwu egwu. Iji nwee ike ịnyefe faịlụ site na ngwaọrụ mkpanaaka gaa na PC, ịkwesịrị ịma otu esi jikọọ ngwaọrụ abụọ a.
Nbudata vidiyo site na YouTube na ekwentị na android na iOS
Ndị ọrụ Intaneti oge a, n'ihi na ọtụtụ n'ime ha, anọwo na-ejikarị eri ihe ọdịnaya multimedia site na ngwaọrụ mkpanaka. Otu n'ime isi mmalite nke nke a, ya bụ, vidiyo dị iche iche, bụ YouTube, gụnyere na smartphones na mbadamba na Android na iOS. N'isiokwu a, anyị ga-ekwu banyere otu esi ebudata vidiyo site na blọọgụ vidiyo kachasị ewu ewu n'ụwa.
Esi ibudata vidiyo site na Facebook gaa na ekwentị na android na iPhone
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na onye ọ bụla nọ na Facebook nọ na-eche banyere ohere ị na-ebudata vidiyo site na netwọk mmekọrịta kachasị mma iji cheta ekwentị ya, n'ihi na ọnụ ọgụgụ nke ọdịnaya na-adọrọ mmasị na nke bara uru na ndekọ ihe enyemaka dị nnọọ ukwuu, ọ bụghị mgbe niile ka ọ bụrụ na ịntanetị iji hụ ya.
Anyị na-emelite ihe nchọgharị weebụ na smartphone
A smartphone na-agba ọsọ gam akporo na iOS maka ọtụtụ ndị ọrụ bụ isi ụzọ ịnweta Ịntanetị. Ịnweta weebụ zuru oke ma dị nchedo nke Web Wide Web na-egosipụta mmelite nke oge nke ihe nchọgharị, ma taa, anyị chọrọ ịgwa gị otu esi eme nke a. Android E nwere ọtụtụ ụzọ isi melite nchọgharị na gam akporo: site na Ụlọ Ahịa Google ma ọ bụ iji faịlụ APK jiri aka.
Hichapụ ibe na VK site na ekwentị
Vkontakte bụ netwọk mmekọrịta ndị kasị ewu ewu na mpaghara nke Russian, nke na-edebanye aha ihe karịrị nde mmadụ 150. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịchọrọ ihichapụ ibe gị, ịnwere ike ime ya ọbụna site na nsụgharị mobile nke saịtị ahụ. Anyị na-ehichapụ ibe na VK site na nsụgharị mobile nke saịtị ahụ. N'okwu a, ị ga-achọ mepee nsụgharị mobile nke netwọk mmekọrịta na nke ọ bụla n'ime ihe nchọgharị weebụ (ị nwere ike ọbụna na ọkọlọtọ).
Anyị na-ebudata vidiyo site na YouTube na ekwentị
Ọ bụrụ na ịchọrọ vidiyo ọ bụla na YouTube, ị nwere ike ịchekwa ya site na agbakwunye na listi ọ bụla na ọrụ ahụ. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta vidiyo a, mgbe, dịka ọmụmaatụ, ịnweghị ike ịntanetị, mgbe ahụ ọ ka mma ibudata ya na ekwentị gị. Na ohere nke nbudata vidiyo na YouTube Ọrụ ntaneti vidiyo n'onwe ya enweghi ike ibudata vidiyo.
Anyị na-eziga foto Odnoklassniki na gam akporo-smartphone na iPhone
Otu n'ime omume nke ndị òtù Odnoklassniki na-emekarị ka ha na-ebuga foto gaa na akụ. Isiokwu ahụ nyere ọtụtụ ụzọ dị iche iche na-enye gị ohere iji ngwa ngwa bulite foto gaa na ebe nrụọrụ OK.RU, na-enwe ihe ama gam akporo ma ọ bụ iPhone. Otu esi etinye Ododo Odiki na Ngwaọrụ Android na-arụ ọrụ n'okpuru gam akporo os osụlị na ngwaọrụ nke kachasị dị mfe nke na-enye ohere iji ọrụ netwọk mmekọrịta, ma tupu ị gaa n'ihu ntuziaka maka itinye ihe oyiyi na Odnoklassniki, a na-atụ aro ịwụnye ọrụ ọrụ ọrụ.
N'oge ọrụ nke smartphone, ihe dị iche iche nwere ike ime, dịka ọmụmaatụ, ọdịda ya n'ime mmiri. Ọ dabara na, smartphones nke oge a na-adịchaghị mfe mmiri, ya mere ọ bụrụ na kọntaktị na mmiri dị mkpụmkpụ, mgbe ahụ, ị ​​ga-enwe ike ịda mbà. Ngwukọrịta na-echebe megide mmiri Ọtụtụ ngwaọrụ nke oge a na-enweta nchebe pụrụ iche megide mmiri na ájá.
Esi ibudata vidiyo site na VKontakte na Android-smartphone na iPhone
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọrụ nile nke netwọk mmekọrịta dịka VKontakte, n'ọnọdụ ọ bụla, mgbe ọ bụla echere na ị nwere ike ibudata vidio na ederede na oghere ndị dị na nchekwa nke ngwaọrụ ha maka ilele offline. N'agbanyeghị eziokwu na nke a agaghị ekwe omume ime kpọmkwem, enwere ọtụtụ ngwanrọ ngwaọrụ ndị na-enye gị ohere ibudata faịlụ site na netwọk mmekọrịta.